जन्मदिनमा अनमोल भन्छन्–‘मसँग काम गर्न गाह्रो छैन’ – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /Intresting/जन्मदिनमा अनमोल भन्छन्–‘मसँग काम गर्न गाह्रो छैन’
नेपाली चलचित्रका सफल नायक अनमोल केसी आजबाट २७ बर्षमा प्रवेश गरेका छन् । वि.सं २०५० साल चैत्र १७ गते जन्मिएका अनमोल आज आफ्नो जन्मदिन मनाउँदैछन् । पिता भूवन केसी र आमा सुस्मिता केसीको कोखबाट जन्मिएका अनमोलले चलचित्र ‘होस्टेल’बाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नायकको रुपमा डेब्यू गरेका थिए । यसपछि सबैजसो चलचित्रमा सफलता व्यहोर्दै अगाडि बढेका अनमोल नेपाली चलचित्रका सबैभन्दा महंगा नायक समेत हुन् ।
आज जन्मदिनमा खास कार्यक्रम केही पनि नभएको बताउने अनमोल परिवारसँग नै सेलिव्रेशन गर्ने बताउँछन् । अनमोलले जन्मदिनको अवसरमा मन्दिरमा पुगेर पूजा गरेको बताए । आजबाट चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ४’को बाँकी छायांकन सुरु हुने सेड्यूल भएपनि मौसमका कारण शुक्रबार सरेको केसीले बताए । उनै, अनमोल केसीसँग जन्मदिनको अवसरमा अनलाइनखबरका लागि ‘विजय आवाज’ले गरेको कुराकानी यसप्रकार छः
१. चलचित्र क्षेत्रमा आएपछि आफ्ना कती सपना पुरा भए जस्तो लाग्छ ?
सपना त मानिसको धेरै हुन्छ । मुख्यकुरा मेरो परिवार नै यही क्षेत्रमा भएका कारणले गर्दा, हामी जे छौं चलचित्र क्षेत्रकै कारणले गर्दा छौं । मुख्यकुरा त दर्शकले दिनुभएको माया नै मुख्य कुरा हो । सपना त हरेक दिन नयाँ नै देख्छु । तर, यो क्षेत्रले जती मलाई दिएको छ, यसबाट म खुशी छु ।
२. नेपाली चलचित्र क्षेत्रले तपाइबाट ठूलो आशा पनि गरेको छ । तपाइलाई भने, नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई कहाँ पुर्याउने लक्ष्य छ ?
कोभिडपछि चलचित्र क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन मन छ । फेरि दर्शकलाई हलसम्म ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि मैले मेरो चलचित्रमा सक्दो मिहिनेत पनि गरेको छु । अर्कोतिर, मलाई बलिउड वा हलिउडमा करिअर खोज्न भन्दा पनि नेपाली चलचित्रलाई मेकिङ र सब–टाइटलको माध्यमबाट विश्वस्तरमा पुर्याउन मन छ ।
३. अनमोलसँग काम गर्न निकै गाह्रो छ भन्छन् नी मेकरहरु ? के तपाई काम गर्न असजिलो नै हो ?
मलाई साइन नगरुन्जेलसम्म मात्र गाह्रो हो । साइन गरेपछि म एकदमै सजिलो छु । चलचित्र साइन गर्दा धेरै कुरा सोचेर काम गर्नुपर्छ । दर्शकको अपेक्षा ममाथि के छ भन्ने पनि मैले वुझ्नपर्छ । त्यहीमाथि अहिलेसम्म, एउटा पनि चलचित्रले कमजोर व्यापार गरेको छैन । यसैले, आफूले जानेको, वुझेको अनुसार म सोचेर मात्र काम गर्छु । यसरी काम गर्दा कतिपयको मन दुख्छ, कतीले इगोको रुपमा लिनुहुन्छ । तर, म त आफ्नो काममा इमान्दार भएको हुँ । धेरै चलचित्र गर्दा फाइदा त मलाई नै हो । यसैले, ममाथि दर्शकले गर्नुभएको भरोसा अनुसार मैले काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच हो । यो कुरामा म अडिग नै छु ।
४. के तपाइलाई आफ्नो अडानमा सधै कायम रहन सक्छु जस्तो लाग्छ ?
मेरो बर्षमा एउटा मात्र चलचित्र गर्नुपर्छ भन्ने सोच होइन । राम्रो कथा आयो भने बर्षमा २–३ वटा पनि गर्छु । राम्रो कुर्नुपर्ने अवस्था आयो भने ३ बर्षमा एउटा पनि गर्न सक्छु ।
५. तपाइलाई चलचित्र असफल हुन्छ कि भन्ने डर कती लाग्छ ?
यो त भैहाल्छ नी । चलचित्र एउटा नायकको कारणले मात्र चल्ने होइन । निर्माता, निर्देशक, कलाकार, प्राविधिक, लेखक, सबै टिमको सहकार्यमा नै चलचित्र चल्ने हो । एउटा चलचित्रको उडान सूरु भएपछि त्यसको सुरक्षित ल्यान्डिङको प्रतिक्षा हुन्छ । चलचित्र रिलिज नभएसम्म मलाई डर लाग्छ नै । अघिल्लो चलचित्र भन्दा व्यापार कस्तो हुने हो भन्ने डरले सताउने गर्छ ।
६. पछिल्लो समय, तपाइलाई ७५ लाखमा चलचित्रको अफर आयो भन्ने खबर सार्वजनिक भएको छ ? यसमा कती सत्यता छ ?
यो कुरा सत्य नै हो । मलाई सो चलचित्रको निर्माण टिमले अफर गर्नुभएको छ । तर, अब सबै कुरा मिल्दै गयो भने म उक्त प्रोजेक्टमा हुन पनि सक्छु । तर, अहिलेसम्म चलचित्र साइन गरेको छैन । तर, उक्त प्रोजेक्टमा काम गर्ने संभावना बढी छ ।
७. अनमोल केसीको पारिश्रमिक किन यत्ती महंगो हुँदै गएको हो ?
मैले सुरुको दिनदेखि नै निर्मातालाई मेरो पारिश्रमिक यति हो भनेर माग गरेको छैन । सायद, उहाँहरुले मेरो ब्रान्ड भ्यालू बुझेर आफै अफर गर्नुभएको होला । मैले बोलेको भरमा दिनैपर्छ भन्ने त कही पनि छैन । सबैले आफ्नो डिमाण्ड राख्न त पाइन्छ । तर, डिमाण्डलाई म्याच गर्ने रिजल्ट दिन पनि आवश्यक छ ।
मेरो चलचित्रले सो रिजल्ट दिएकाले पनि मलाई महंगो पारिश्रमिकमा अफर गर्नुभएको होला । सुरुको दिनदेखि मैले पैसा हेरेको छैन । पैसाको पछि भागेको भए त मैले बर्षमा थुप्रै चलचित्रमा काम गर्थेँ होला । म पैसाको पछि भाग्ने मानिस नै परिनँ ।
तोलामा ७ सय रूपैयाँले घट्यो सुन